Iindaba -Easier kulula kunokwenza
Kulula ukutsho ngaphandle kokwenza! Ungayiphepha njani "iNtlekele yoyilo" yeziVali zeMidlalo
Ukujonga kwimiqolo yemidlalo yebhodi kwirakhi yomdlalo, ngaba uyawukhumbula umdlalo onesembozo esithandekayo kumbono wokuqala? Okanye umdlalo omatshini wawo uyonwabisa, kodwa ujongeka woyika kancinci.
Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, isiciko somdlalo simisela ukuba umdlalo ulungile okanye awulunganga. Ngokuphuculwa kwenqanaba lobuhle babantu, imidlalo yebhodi ayiseyomveliso ebandakanya ubuchwephesha kuphela. Ubugcisa bemidlalo kudala baba yinto ebalulekileyo nokuba umdlalo webhodi ungathengiswa kakuhle.
Kutshanje, inkampani yomdlalo ebipapashe Qhafaza Ukhuphe umdlalo omtsha wokuqikelela igama: ILizwi eliyiNtloko. Umlawuli wezobugcisa womdlalo,UManuel Sanchez, Ibonise abadlali inkqubo yokuyila ebonakalayo kunye nekhava yomdlalo.
Isikhuselo somdlalo esibonakala silula siye sahamba namathandabuzo amaninzi, uqikelelo kunye nokuzama okuphindiweyo. Njengomdlalo weqela, indlela yokuma ngaphandle kwimidlalo emininzi iba yingxaki enzima kuyoILizwi eliyiNtloko.
ILizwi eliyiNtloko ngumdlalo weqela elithelekelelayo. Kumdlalo, umdlali omnye sisikhokelo, ukudweba amakhadi kumgangatho. Abanye abadlali banoxanduva lokuqikelela amagama.
ILizwi eliyiNtloko yahlulwe yangamacandelo amabini, icandelo elimhlophe bububanzi bamagama, icandelo elibomvu luphawu oluthile, olunjenge: inkomo yezilwanyana, uphawu lwe-adidas, uphawu lweMickey Mouse, njl.
Icandelo elimhlophe liyakuboniswa kuqikelelo. Umjikelo womdlalo unemizuzwana engama-90 iyonke kubaqashisi ukuba baqikelele igama kwaye bagcwalise ikhadi lokuqikelela. Umdlali ngamnye unamakhadi amathathu abomvu abomvu.
Uyenza njani ikhava yomdlalo weqela?
Kumdlalo weqela eliqhelekileyo, ukutyalomali kwexesha kunye nezixhobo kubonakala kulilize. Kodwa, njengoko isitsho le nto, ubunzima yeyona nto inzima. Ngokukodwa xa sifuna ukongeza kakhulu, kodwa asifuni kufana nabanye.
Xa siqala ukubona umdlalo webhodi, yeyiphi into yokuqala esitsalayo? Ewe, kufuneka ibe yibhokisi yomdlalo. Kumdlalo onezihloko, abalinganiswa esibabona kwikhava yi-avatar yomdlali, umlinganiswa abadlalayo kumdlalo.
Nangona kunjalo, kwimidlalo engeyiyo imixholo, ngakumbi imidlalo yeqela engenabalinganiswa abathile kunye namagama aqikelelweyo, ingxaki yokwenza isiciko esinyanzelisayo yinto eqhubekayo. Okokuqala, imidlalo yeqela inabaphulaphuli ababanzi kangangokuba ikhava yomdlalo oqhelekileyo ayizukubhena nakubani na.
Ukuba unezinto ezininzi kakhulu kwikhava yakho, abantu ngekhe bazi ukuba loluphi uhlobo lomdlalo wakho ekufuneka ubelulo. Umzekelo: Ukuba uyila isiciko esicacileyo, njengemvelaphi etyebe kakhulu enesihloko esikhulu, umdlalo wakho uya kulahleka kumakhulu emidlalo yesiqhelo, njengaye wonke umntu. Kwiminyaka yakutshanje, iqela lemidlalo yeqela lizenzele igama kumzi mveliso webhodi ngemizobo eyahlukileyo.
Nini Ulwimi kumatshini weskyshatter Ngokukhutshwa kwencwadi encinci, abantu abaninzi babecinga ukuba kukuzibulala. Kodwa enyanisweni, olu qweqwe lwamva nje lubetha ngokwenene. Siphinde sazenzela ezethu “iiglavu ezimhlophe” kunye neempawu zekhathuni ze-retro kwikhava yomdlalo, eye yaphumelela ngakumbi.
"Nguwe" oyena mntu uphambili-
Kwi ILizwi eliyiNtloko, ngenxa yendima yenkokeli, umzobi Sebastian Ndaye ndagqiba kwelokuba ndizobe umzobo njengobungqina bomfanekiso wenkokeli. Nangona kunjalo, ukudala abalinganiswa ngumsebenzi onobungozi: intombazana okanye inkwenkwe? Umncinci okanye ukhulile? Umnyama okanye umhlophe?
Kumdlalo wethu, umdlalo wokubhala amagama kunye namagama okuqikelela ngumdlalo ovavanya ukuphendula kunye nobulumko, kwaye impungutye ngokwenene lukhetho olungcono-kodwa oku kuphakamisa omnye umbuzo: Ngaba kububudenge kakhulu?
Sebastian uthe ukuba abalinganiswa bethu badibanisa i-retro kunye neyangoku, ngekhe kubekho amathandabuzo anje ngala:
Ngokusekwe koku, (umbonisi) wazoba imizobo yezilwanyana ezahlukeneyo.
Okokugqibela kubunzima yinto elula-
Emva kokuxoxa nomyili womdlalo UGérald Cattiaux kunye nomzobi waseFrance AsmodeeSizimisele isishwankathelo somdlalo kunye: iinkwenkwezi ezibomvu azongezi umbala kuphela, kodwa zikwabonisa umxholo womdlalo weqela.
Ngale ndlela, ikhava yomdlalo kunye nombono ngokubanzi ILizwi eliyiNtloko zenziwe ngale ndlela. Indibaniselwano ebomvu ebomvu kunye nomnyama ilula kwaye inesisa. Intloko yempungutye encinci yahlula umphambili kunye nomva wekhadi, kunye noyilo olumhlophe nobomvu kwikhadi le-cue likhululekile kwaye lihambelana nomphumo opheleleyo.
Sihlala sigxila kuyilo loyilo lomdlalo womdlalo kwaye sifunde impumelelo yawo. Ngapha koko, imibala yamaqweqwe, amakhadi neethokheni naphi na apho sijonga khona zonke ziyilwe ngocoselelo.
Abaqulunqi bemidlalo bahlala besithi uyilo lomdlalo yinkqubo yokukhupha ngokuqhubekayo. Uyilo lweqweqwe lomdlalo ikwayinkqubo yokwenza lula ukuntsokotha. Emva kwayo yonke loo nto, imidlalo yebhodi iyonke, kwaye ubugcisa bukwabonisa inxenye yamandla emidlalo yebhodi.
Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Ikhadi lemikhono, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Idayisi yesiNtu, Umtya weBhodi yeMidlalo,